Iindaba-Ezingelukiweyo: I-Textile Yekamva!
Igama elithi nonwoven lithetha ukuba akukho “ephothiweyo” okanye “alukiweyo”, kodwa ilaphu lingaphezulu. Ukungaluki sisakhiwo sendwangu eveliswa ngokuthe ngqo kwimicu ngokudibanisa okanye ukudibanisa okanye zombini. Ayinayo nayiphi na into ehleliweyo yejiyometri, endaweni yoko sisiphumo sobudlelwane phakathi kwefibre enye kunye nenye. Ezona ngcambu zezinto ezingalukwanga zisenokungacaci kodwa igama elithi “amalaphu angalukwanga” laqanjwa ngo-1942 kwaye laveliswa eUnited States.
Amalaphu angalukwanga enziwe ngeendlela ezimbini eziphambili: ziyacinywa okanye zibotshiwe. Ilaphu elingelukiweyo elicociweyo liveliswa ngokubeka amashiti amancinci, emva koko kusetyenziswa ubushushu, ukufuma kunye noxinzelelo lokunciphisa kunye nokucinezela imicu kwilaphu elingqingqwa elingazukuphola okanye lonakalise. Kwakhona zintathu iindlela eziphambili zokuvelisa amalaphu angadibanangayo: Kwabekwa ngokuBomileyo, kubekwe emanzi & kwajikeleza ngqo. Kwinkqubo yokuvelisa iLaphu engalukwanga eyomileyo, iwebhu yemicu ibekwa kwigubu kwaye umoya oshushu ufakwe ukuze udibanise imicu kunye. Kwinkqubo yokuvelisa amalaphu angalukwanga emanzi, i-web yeentsinga ixutywe nesinyibilikisi esithambileyo esikhupha into efana neglu ebopha imicu kunye kwaye iwebhu ibekwe ukuze yome. Kwinkqubo yokuvelisa yeLaphu engalukwanga ngokuthe ngqo, ii-fibers zisongelwa kwibhanti yokuhambisa kwaye iiglu zifafazwa kwiifayibha, emva koko zicinezelwe ukudityaniswa. (Kwimeko yemisonto ye-thermoplastic, iglu ayimfuneko.)
Naphi na apho uhleli khona okanye umi khona ngoku, vele ujonge ujonge kwaye uzokufumana ubuncinci ilaphu elinye elingalukwanga. Amalaphu nonwoven zingene kuluhlu olubanzi lweemarike kubandakanya ezonyango, iimpahla, imoto, ukuhluza, ulwakhiwo, geotextiles kunye nokukhusela. Imihla ngemihla ukusetyenziswa kwendwangu engalukanga kuyanda kwaye ngaphandle kwabo ubomi bethu bangoku abunakuqondakala. Ngokusisiseko kukho iindidi ezi-2 zelaphu elingalukiyo: Ehlala ixesha elide kunye nokulahla. Malunga ne-60% yelaphu elingenalukhuni lihlala ixesha elide kwaye ukuphumla ama-40% kulahliwe.
Bambalwa ubuGcisa kwiShishini elingeluki:
Imveliso engalukwanga ihlala ityebiswa lixesha elifuna ubuchule kwaye oku kuyanceda ukuqhubela phambili amashishini.
I-Surfaceskins (i-Nonwovens Innovation kunye neZiko loPhando- i-NIRI): Ngumnyango we-antibacterial ucofa iipads kunye nokudonsa izibambo ezenzelwe ukubulala iintsholongwane kunye neebhaktheriya kwimizuzwana ebalulekileyo, phakathi komsebenzisi omnye kunye nolandelayo odlula emnyango. Yiyo loo nto inceda ukuthintela ukusasazeka kweentsholongwane kunye neebhaktiriya phakathi kwabasebenzisi.
I-Reicofil 5 (Reifenhäuser Reicofil GmbH & Co KG): Obu buchwephesha buhambisa ezona zinto zinemveliso, zithembekile kwaye zisebenza ngokufanelekileyo iteknoloji yomgca ethoba iziqwengana ezinzima ngama-90 epesenti; kwandisa imveliso ukuya ku-1200 m / min; ulungelelanisa ixesha lokugcinwa; kunciphisa ukusetyenziswa kwamandla.
Ukulungisa kwakhona i-Hernia Patch ye-Compound (i-Shanghai Pine kunye ne-Power Biotech): Sisikwere esine-electro-spun nano-scale esinexabiso eliphantsi kakhulu elinokungeniswa ngokuthathwa kwebhayoloji kwaye sisebenza njengesikhululo sokukhula kweeseli ezintsha, ekugqibeleni ukubola kwento; ukunciphisa izinga leengxaki zasemva kokusebenza.
Ukugcina phantse ixesha elingenakonakala lokukhula kule minyaka ingama-50 idlulileyo, engalukwanga inokuba sisiqendu sokuphuma kwelanga seshishini lempahla eyolukiweyo elinengeniso ephezulu kunayo nayiphi na imveliso yelaphu. Imakethi yelizwe lonke yengubo engalukwanga ikhokelwa yi China enesabelo sentengiso esimalunga ne-35%, ilandelwa yiYurophu enesabelo sentengiso esimalunga nama-25%. Abadlali abakhokelayo kolu shishino yi-AVINTIV, iFreudenberg, iDuPont kunye neAhlstrom, apho i-AVINTIV ingoyena mvelisi mkhulu, kunye nesabelo semarike yemveliso ejikeleze i-7%.
Ngexesha lakutshanje, ngokunyuka kwamatyala e-COVIC-19, imfuno yococeko kunye neemveliso zonyango ezenziwe ngelaphu elingalukwanga (ezinje ngeekepusi zotyando, iimaski zoqhaqho, i-PPE, ifaskoti yezonyango, iziciko zezihlangu njlnjl.) Inyukile yaya kwi-10x ukuya 30x kumazwe ahlukeneyo.
Ngokwengxelo yevenkile enkulu yophando kwimarike "Uphando kunye neeMarike", imakethi yeNtengiso yeLizwe engafakwanga yenze i-44.37 yezigidigidi kwi-2017 kwaye kulindeleke ukuba ifike kwi-98.78 yezigidigidi nge-2026, ikhule kwi-CAGR ye-9.3% ngexesha lokuqikelela. Kukwacingelwa ukuba intengiso yexesha elide engalukwanga iya kukhula ngenqanaba eliphezulu le-CAGR.
Kutheni le ingaluki?
I-nonwovens zizinto ezintsha, ezobuchule, ezenza izinto ezahlukeneyo, itekhnoloji ephezulu, enokuziqhelanisa nezinto, ebalulekileyo kunye nokubola. Olu hlobo lwelaphu luveliswa ngokuthe ngqo kwimicu. Ke akukho sidingo samanyathelo okulungiselela umsonto. Inkqubo yokuvelisa imfutshane kwaye kulula. Apho ukuvelisa khona i-5,00,000 yeemitha zelaphu elilukiweyo, kuthatha malunga neenyanga ezi-6 (iinyanga ezimbini zokulungiselela umsonto, iinyanga ezi-3 zokuluka kwi-50 looms, inyanga e-1 yokugqiba kunye nokuhlola), kuthatha iinyanga ezi-2 kuphela ukuvelisa ubungakanani obufanayo yengubo engalukwanga. Ke ngoko, apho izinga lemveliso yelaphu elilukiweyo liyi-1mete / ngomzuzu kwaye inqanaba lemveliso yelaphu elinithiweyo liyimitha ezi-2 / ngomzuzu, kodwa izinga lemveliso yelaphu elingalukwanga li-100 yemitha / ngomzuzu. Ngapha koko iindleko zemveliso ziphantsi. Ngaphandle koko, ilaphu nonwoven ebonisa iipropati ezithile ezifana amandla aphezulu, breathability, absorbency, ukuzinza, ubunzima ukukhanya, ukudodobalisa amadangatye, disposability njl Ngenxa yazo zonke ezi zinto, icandelo lempahla ehambela amalaphu non-ephothiweyo.
Ilaphu elingalukwanga kuhlala kusithiwa likamva loshishino lwempahla eyolukiweyo njengoko ibango labo kwihlabathi liphela kunye nokuguquguquka kokuya phezulu nangaphezulu.